‘५ हजार भोट बदर नभएको भए त म सोझै आउने थिएँ । खासमा त्यो चु,नाव मैले हा,रेको हैन :वामदेव गौतम
September 4, 2020 September 4, 2020 adminLeaveaComment on ‘५ हजार भोट बदर नभएको भए त म सोझै आउने थिएँ । खासमा त्यो चु,नाव मैले हा,रेको हैन :वामदेव गौतम
काठमाडौँ — फागुन १४ गतेको नि`र्णय का`र्यान्व,यन गर्ने बताएसँगै केही दिनमा वामदेव गौतमले रा`ष्ट्रिय सभाको या,त्रा गर्ने नि,श्चित भएको छ ।२०७४ मंसिरको चु`ना`वमा बर्दिया–१ बाट परा`जित भएयता प्र`तिनिधिसभा सदश्य बन्न बा`रम्बार प्र`यास गरेका नेकपा उ`पाध्यक्ष वामदेव गौतम ३३ महिनापछि मनो`नीत को`टामा सां`सद बनेर सं`घीय संस`द् छिर्ने भएका छन् ।
निर्वा`चन हा`रे पनि सां`सद र म,न्त्री बन्ने नेपाली राज`नी`तिभित्र वर्षौंदेखि हुर्कि,इरहेको वि,कृतिको शृं`खलामा फेरि नयाँ अध्या´य थपिन लागेको हो । यसै सन्द`र्भमा नेकपाका उपा`ध्यक्षसमेत रहेका वामदेव गौतमसँग कान्तिपुरका लागि बिनु सुवेदीले गरेको कु,राकानीको सम्पादित अं`श अ,न्ततः तपाईं सं`सद्‍मा जाने नि`र्णय भयो, यो निर्ण`यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आ,गामी दिनमा मैले गर्ने कामबाट यो निर्ण`य कति उपयु`क्त थियो भन्ने सा`वित हुन्छ । राष्ट्रिय स,भामा मनो`नय`न गर्ने स,र्वसम्मत निर्ण`य पा`र्टीले गत फागुन १४ गते गरेको थियो, त्यो नि`र्णय का`र्यान्व`यन गर्नुपर्छ भनेर हामीले ६ महिनादेखि प्र`धानमन्त्री र रा`ष्ट्रपतिलाई पनि भनेका थियौं । विभिन्न कार,णले त्यो ल`म्बिएर गयो । आज निर्ण`य भएको छ । यो कति मह`त्त्वपूर्ण छ भनेर मैले कामबाट देखाउनुपर्छ ।
भवि`ष्यमा देखाउने काम के हुन्छ ?
के हुन्छ भन्ने त प्रधा`नमन्त्रीले बुझ्ने कुरा हुन्छ ।
तपाईंको यो`जना पनि त छ होला नि ?
राष्ट्रिय स`भामा मात्रै सद`स्य भएर बसेँ भने मेरो खा´सै त्यति ठू`लो भूमि`का हुँदैन । राष्ट्रिय स,भा स`दस्य भइसकेपछि मन्त्रिपरि´षद्मा गएर मैले गर्ने कामहरू नै सबभन्दा मह´त्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसमा मैले के अव´सर पाउँछु, मैले कति राम्रो काम गर्न सक्छु, त्यसले हाम्रो देशको सम`स्या समा`धान गर्न कति मह`त्त्वपूर्ण भूमि`का नि`र्वाह गर्छ भन्ने सम्ब`न्धमा त्यसबेला नै भन्न सकिन्छ ।
भन्नाले अबको बाटो भनेको सर`कारमा जाने नै हो ?
अहिले नै भ`न्न सकिन्न । ,सरकारमा जाने–नजाने भन्ने त प्र`धानमन्त्रीकै वि`षय हुन्छ ।
प्रधा`नमन्त्रीसँग सरकारमा स`हभागी हुने विषयमा छ`लफल गर्नुभएको छ ?अहिलेसम्म छैन । प्र`तिनि`धिसभामा परा`जित भएपछि ५ वर्ष पनि कु`र्न नसकेर तपाईं र तपाईंको पा`र्टी नेकपाले जनम`तको क`दर नग`रेको टि`प्प`णी भइरहेको छ नि ?
मैले बर्दियामा ४४ हजार ६९ म,त प्रा,प्त गरेँ तर मेरो नाममा परेको ५ हजार भोट ब,दर भयो । बद,र नभएको भए त म सोझै आउने थिएँ । खा`समा त्यो चु`नाव मैले हा`रेको हैन । तर जुन प्र,णाली अबल,म्बन गरेका छौं, त्यसले गर्दा हा,रेको देखियो । हाम्रा मतदा,तालाई स्प`ष्ट पारेको भए ४९ हजार भोट ल्याएर मैले त्यतिखेरै जि`त्ने स्थि´ति हो । त्यहाँ हाम्रो कम`जो,री भयो । विद्यु`तीय प्र`णाली भएको भए म उतिखेरै प्रतिनि`धिसभामा आइसक्थेँ । त्यसका`रण परिब`न्धले भनौं या प्रावि`धिक त्रु`टिले म हा`रेको देखियो । अब हरा`उन जोसुकै लागे पनि हा`रेको हैन भन्ने मैले म`हसु`स गरेको छु ।
तपाईंलाई उपाध्यक्ष बनाउन पनि नेकपाले वि`धान संशो`धन गर्‍यो, अलि अघि प्र`धानमन्त्री बनाउन भन्दै संविधान `संसो,धन ब`हस नै चल्यो, अहिले राष्ट्रिय स,भामा ल्यायो ? तपाईंको के गु`णका कार`ण हो पा`र्टीले यति धेरै मा`या गरेको ?
मेरो भू`मिका पा`र्टीले कहाँ देख्छ र कुन जिम्मे,वारी पाउँदा मैले राम्रो भू`मिका निभा`उन सक्छु भन्ने हो । अब मेरो अगाडिको भू`मिका के हुन्छ भन्ने पनि मैले जिम्मे`वारी के पाउँछु भन्नेमा आधा`रित हुन्छ । प्र,धानमन्त्रीले मेरो भू`मिका कहाँ देख्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले लै`जानुभयो र जि,म्मा दिनुभयो भने अनि म रा,ष्ट्रिय स`भामा गएर के भयो भन्ने कुरा त्यहाँ पु`ष्टि गर्छु । अब राष्ट्रिय स`भाको गरिमा बढाउनका नि`म्ति त सका`रात्मक भू`मिका नै हुन्छ । तर राष्ट्रिय स`भामा जाँ`दैमा सबकु`छ हुँदैन । ekantipur बाट
खतिवडाको बहि`र्गमनसंगै अ`र्थमन्त्रीको ला`इनमा छन् यि नेता
अन्तःशुल्क स्टिकर स्वदेशमै छाप्न दिने तयारी
अ,तिक्र,मित कालापानी क्षे,त्रमा ब,स्ती बढाउँदै भारत
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घरमा चो.री,
भे`डो शैलीमा नेताको पछि लाग्ने लाखौं लम्पट कार्यकर्ता यो देशको संवृ`द्धिको बा`धक हुन् : संविधानविद् आचार्य
झुक्किएर पनि नगर्नुहोस यी काम,मिर्गौला बिग्रन सक्छ …हेर्नुहोस् । जानकारी लागि सेयर गर्नुहोस् ।
सांसद बस्नेतले दिए दशैंभत्ताको रकम भक्तपुर अस्पताललाई,,,हेर्नुहोस् ।
दसैं भ,त्ता फि,र्ता गर्न देउवाको निर्देशन, को,रोना संक्र,मितको उपचार गर्न सरकारसँग माग
संक्रमितको उपचार नै गरिन्न भन्नू सरकारको लाजमर्दो कुरा हो, नगर्ने भए के सरकारको काम संक्रमित गन्ने मात्रै हो?-नेता थापा